स्विडेनमा के हेर्ने - पत्ता लगाउने मुख्य बुँदाहरू Absolut यात्रा
के स्वीडेन मा हेर्न
सुसाना Godoy | | Suecia
स्कान्डिनेभिया देश सम्पूर्ण यूरोप मा पाँचौं ठूलो हो। यसले हामीलाई पहिले नै एउटा संकेत दिन्छ कि हामीले पत्ता लगाउन सक्ने थुप्रै कुनामाहरू छन्। तर केवल स्मारकहरूको हिसाबले मात्र होइन, हामी जहिले पनि उल्लेख गर्दछौं। यस अवस्थामा, हामी पनि प्रकृति थप्नेछौं जब तिनीहरूले हामीलाई सोधे के स्वीडेनमा हेर्न.
किनभने विश्वको यस पक्षमा यसको विशेष भूमिका छ। त्यसकारण जब स्विडेनीहरूले आफूलाई सबैभन्दा आकर्षक व्यक्तिको उल्लेख गर्नुपर्दछ, तिनीहरू त्यसो गर्न स्पष्ट हिचकिचाउँदैनन्। यदि तपाइँको मा अर्को छुट्टिहरु तपाईंसँग अवसर छ, हामी तपाईंलाई स्विडेनमा के हेर्ने बारेमा उत्तम मार्गनिर्देशन गर्दछौं।
1 स्टॉकहोम पुरानो शहर
2 शाही दरबार
3 Liseberg मनोरंजन पार्क
4 सेन्ट निकोलस क्याथेड्रल स्टॉकहोम
5 मालमा महल
6 के स्वीडेन मा हेर्न, स्टॉकहोम द्वीपसमूह
8 के स्वीडेनमा हेर्न, गोटा नहर
स्टॉकहोम पुरानो शहर
जब हामीले स्विडेनमा के हेर्ने भनेर आफैलाई सोध्यौं, यो स्पष्ट भयो कि हामीले भ्रमण गरेका शहरहरूको सब भन्दा पुरानो हिस्सा सधैं पर्यटकहरूको आकर्षणको आकर्षण हो। यसैले यस अवस्थामा हामी पछाडि छोड्ने छैनौं र हामी पहिलो स्टप भित्र राख्छौं स्टॉकहोम र यसको पुरानो भाग। सडकहरू कब्बल छन् र मध्यकालीन कट मा शर्त छ कि हामीलाई समय मा फिर्ता यात्रा गर्दछ। अवश्य पनि तिनीहरूमार्फत हामी प्लाजा मेयर वा शाही दरबारमा पुग्न सक्दछौं, जहाँ सधैं हाम्रो ध्यान चाहिन्छ। पुरानो स्टक एक्सचेन्ज भवन नबिर्सिनु।
हो, हामीले यसलाई उल्लेख गरेका छौं, तर यसलाई हाम्रो पूर्ण ध्यान आवश्यक छ। यो क्षेत्र मा अवस्थित छ स्लोट्सब्याकन। १ th औं शताब्दीसम्म यो सधैं राजाहरूको निवासको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। तर जब यो स्थानान्तरण हुन्छ, यो ठाउँ अफसरशाही कार्यहरू जस्तै आधिकारिक कार्यहरूको लागि मात्र हो। यो सत्य हो कि सबै कोठाहरू सर्वसाधारणको लागि खुला हुँदैन, तर अन्यमा हामी प्रदर्शनीहरू र संग्रहालयहरू देख्न सक्छौं। भवनको ठीक अगाडि त्यहाँ एक ठूलो एस्प्लानेड छ र जहाँ गार्डको परिवर्तन हुन्छ। त्यसोभए यो अर्को क्षण हो जुन तपाईंले मिस गर्न सक्नुहुन्न।
Liseberg मनोरंजन पार्क
सबैभन्दा माथि यदि तपाईं घर मा साना बच्चाहरु संग यात्रा, एक मनोरञ्जन पार्क मा एक स्टप कहिल्यै दुख्छ। यो सबै भन्दा धेरै भ्रमणको साथ एक पार्क हो भनिन्छ। यसको मुख्य आकर्षण मध्ये एक काठको रोलर कोस्टर हो, यो क्षेत्रलाई 30० भन्दा बढी बिभिन्न गतिविधिहरू छन् भनेर नबिर्सनुहोस्। जस मध्ये हामी पानीको पैदल हिलाई हाईलाईट गर्दछौं, यसको झरना र प्रकृति पत्ता लगाउँदै।
सेन्ट निकोलस क्याथेड्रल स्टॉकहोम
यो सब भन्दा पुरानो चर्च हो, यसैले यस ठाउँमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दा पनि हाम्रो ध्यान चाहिन्छ। भनिन्छ कि तेह्रौं शताब्दीमा यसलाई पहिले नै यसको अस्तित्वको बारेमा थाहा थियो। योसँग एकल धरहरा छ, ईट्टाले बनेको र चित्रित भित्ताहरूसँग। यो भन्नु पर्दछ कि मूल शैली गोथिक थियो, जुन सामान्यतया यी केसहरूमा हुन्छ, कि पुन: निर्माणले एक अर्कालाई पछ्यायो। त्यसैले हामीले ठूला ब्रशस्ट्रोकको बारेमा कुरा गर्नुपर्नेछ बारोक शैली। तर पनि, भित्र हामी धेरै पुराना चित्रहरूको श्रृंखला भेट्टाउँदछौं।
यस अवस्थामा हामीले स्वीडेनको दक्षिणतिर जानु पर्छ, जहाँ हामी यो किल्ला भेट्दछौं। यस स्थानमा १ cast औं शताब्दीमा पहिलो किल्ला डेटि was गरिएको थियो, यद्यपि यसलाई पछि ध्वस्त पारियो। पहिले नै १ XNUMX औं शताब्दीमा, नयाँ संरचनाले नयाँ महललाई जीवन दिन सुरू गर्यो। यद्यपि यो पनि भन्नुपर्दछ कि केहि बर्षसम्म यसले पतिका लागि जेलको रूपमा काम गर्‍यो स्कटल्याण्डकी मेरी मेरी। यद्यपि यो इतिहासमा रहन्छ, यस ठाउँको सौन्दर्यले स्थानीय र अपरिचितहरूलाई प्रभाव पार्दछ।
के स्वीडेन मा हेर्न, स्टॉकहोम द्वीपसमूह
सुरुमा हामीले ती स्थानहरू उल्लेख गर्‍यौं जुन प्रकृति पनि साझा गर्थे। ती कुनाहरू केन्द्र र स्मारकहरूबाट सास लिन। खैर, यस्तो देखिन्छ कि धेरै मानिसहरू सहमत छन् कि स्टॉकहोम द्वीपसमूह। त्यसोभए यदि तपाइँले चिह्नित गर्नुभएको मार्गबाट ​​अलि बिच्छेद गर्न चाहानुहुन्छ भने यस ठाउँ र यसका टापुहरूको बीच डु trip्गा यात्रा जस्तो केहि पनि छैन। यसले तपाइँलाई अविस्मरणीय क्षणहरू र अवश्य छोड्नेछ, अनुभवहरू महत्त्वपूर्ण छन् भनेर विचार।
यदि तपाईं हिँड्न र पैदल यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं पक्कै यो मार्ग मनपर्नुहुनेछ। तर हो, तपाईसँग यो गर्न सक्षम हुनको लागि थोरै वा पर्याप्त अभ्यास आवश्यक छ। यो एक हो संसारभरि सबैभन्दा प्रसिद्ध मार्गहरू, 400०० किलोमिटरमा गणना गर्दै। ल्यापल्याण्डको सुन्दर पहाडी परिदृश्य, जसमा तपाईले एक अनुपम सौन्दर्य पाउनुहुनेछ। थप रूपमा, यो चार प्रमुख पार्कहरू हुँदै जान्छ। तपाईं तालहरू, साना शहरहरू र अन्तहीन हिमालहरू पार गर्नुहुनेछ। के तपाइँ त्यस्तो केहि प्रतिरोध गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
के स्वीडेनमा हेर्न, गोटा नहर
यो १ th औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो र यो देशको दक्षिणमा अवस्थित छ। यो ओस्ट्रोगोटिया र पश्चिमी गोटियाको प्रान्तहरूको माध्यमबाट जान्छ। तपाईं डुot्गामा गोटेनबर्गबाट ​​बाल्टिक सागरसम्म यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए यसले यी दुई शहरहरूलाई एकीकृत गर्दछ किनकि तिनीहरूको उल्लेख छ गोथेनबर्ग र स्टॉकहोम। तसर्थ, के यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ र परम्पराको साथसाथै यो बोक्ने सौन्दर्यका लागि, यो ध्यानमा राख्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरू मध्ये एक हो।
गोटेनबर्गको उत्तरी, हामी महान सुन्दरताको टापु भेट्टाउँछौं। एउटा कि हामीले कि त याद गर्न सकेनौं। यसमा पनि हामी देख्न सक्छौंa१th औं शताब्दीको किल्ला। वाइकि din डिनरको रूपमा उनीहरूसँग विषयगत प्रतिनिधित्व छ, जुन भूमिकामा छिर्न कहिल्यै दुख्दैन। यी कुन बिन्दुमा तपाइँ भ्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » के स्वीडेन मा हेर्न